> Resource> iPhone> Atụmatụ maka Ịmafe si gam akporo ka iPhone
Ebe ọ bụ na ọhụrụ iPhone 6S / 6S Plus wepụtara na 2015, ọtụtụ ndị nwetara mmasị na ya na ọ ga-amasị iji nweta ọhụrụ a iPhone nlereanya. Ya mere, n'agbanyeghị na ị na-ịmafe si gam akporo ka iPhone ma ọ bụ nanị na-amalite iji ọhụrụ iPhone, ị na-eme ezi nhọrọ.
Uru maka Ịmafe si gam akporo ka iPhone
-Ekwu, mgbe ị akpatre kpebiri ka ịgbanwee si ogologo oge eji Android ka iPhone, m mara mma n'aka na ị mụtara a otutu ma mara uru nke iPhone. Mgbe m ka na-amasị dokwuo anya ụfọdụ dị mkpa atụmatụ ị ga-wee mgbe Switched si gam akporo ka iPhone.
Ị ga-esi ka mma polished ọrụ interface on iPhone. Anyị niile maara Google na-arụ ọrụ a otutu na gbalịrị ime ka Android smoother na quicker, na ọ ka mma n'ụzọ. Ma, dị ka a okwu nke N'ezie, iPhone ka na-arụ ọrụ smoother na ọsọ karịa Android.
The iPhone ngwa ilekota bụ n'ezie egwu na enyi na enyi. Ọ bụ unbelievably mfe ka mmekọrịta ngwa ọdịnala na kwa data n'etiti gị dị iche iche iOS ngwaọrụ. Dị ka anyị nile mara, na Apple App Echekwala na Google Play nwere fọrọ nke nta otu ukwu ngwa, na ọtụtụ ndị isi ngwa ọdịnala dị na ma nyiwe, ma ọhụrụ ngwa ma ọ bụ mmelite pụta akpa ke iOS.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac ọrụ, ọ ga-abụ nnọọ mfe iji iPhone-arụ ọrụ na ya karịa Android. Ị nwere ike mfe nyefee data na ọdịnaya n'etiti ha, na-eme ma na-aza oku na enyemaka nke e wepụtara ọhụrụ iOS 9, ọ pụrụ ịbụ a siri ike ọrụ ọ bụrụ na ị na-eji ihe Android on a Mac. Agbanyeghị, e nwere ndị ka ngwọta ọ bụrụ na ị arapara ya.
Otú nyefee Data Mgbe Ịmafe si gam akporo ka iPhone
Adịghị m na-asị na Android bụ bụghị oké, dị nnọọ chọrọ ka ị mara uru ị pụrụ ịnụ ụtọ mgbe ịmafe si gam akporo ka iPhone. Mgbe nwetara ọhụrụ gị iPhone, ndị mbụ na kasị headachy nsogbu ị pụrụ izute bụ otú nyefee ọdịnaya site Android ka iPhone. Ọ dị nnọọ dị iche iche si nyefe si Android ka Android ma ọ bụ site na iPhone ka iPhone, na ọ bụ ihe siri ike iji nweta ebe ọ na-ezo aka ịgafe n'elu ikpo okwu data ebufe. I nwekwara ike-eso nke a zuru ndu nyefee data mfe na n'enweghị n'etiti ọ bụla ntị, n'agbanyeghị na ị na-enwe gam akporo igwe, iPhone, ma ọ bụ Nokia.
Mgbe echegbula, anyị nwere free ngwọta ebe a na-atụ aro site ukara Apple akwado otu, ọ na-akọwa n'ụzọ zuru ezu na banyere otú nyefee kọntaktị, ozi ịntanetị, kalenda, music, videos, photos na ndị ọzọ na akwụkwọ mgbe ịmafe si gam akporo ka iPhone, ọ ga- -abụ nnọọ mfe aka na, dị nnọọ mkpa inwe ndidi ma na-oge ụfọdụ rụchaa ha nile.
Ọ bụrụ na ị enweghị oge na chọrọ a ngwa ngwa ụzọ ka ịgbanwee gaa na iPhone, ụfọdụ 3rd otu ngwá ọrụ dị ka Wondershare MobileGo nwere ike ịbụ ezi ihe kwesịrị ekwesị. Site n'enyemaka nke a mobile ịmafe ngwá ọrụ, anyị nwere ike mfe na ngwa ngwa nyefee niile ahụ dị mkpa nke ọdịnaya si gam akporo ka iPhone na nanị otu-click. The akụkụ kasị mma bụ bụghị nanị Android na iPhone na-akwado, na Blackberry na Nokia na-gụnyere kwa. Ebe a bụ nseta ihuenyo nke MobileGo n'okpuru maka gị akwụkwọ, na nzọụkwụ na-nnọọ mfe:
Download Wondershare MobileGo na wụnye ya.
Ugboro abụọ click na-amalite ngwá ọrụ, mgbe ahụ, isi Super toolbox na ẹkedori ekwentị Nyefee.
Pịa ekwentị na ekwentị Nyefee na ego ndị dị mkpa ọdịnaya, pịa Malite Detuo, faịlụ ebufe usoro ga-amalite.
Chere maka a nkeji ole na ole (oge ahụ kpọmkwem na-adabere otú nnukwu faịlụ na ị nyefee) ina ọrụ ahụ.
Amagbu, nri? Onye ọ bụla nwere ike mfe na ngwa ngwa nyefee mkpa data si Android ka iPhone effortlessly, ọ na-eme Android ịmafe usoro ihe ọma na-anakwere. E wezụga MobileGo anyị na-atụ aro n'ebe a, e nwekwara ndị ọzọ data ebufe ngwaọrụ na mobile ngwa ọdịnala dị, họrọ onye ị na-ahọrọ na-eme ka ịmafe eme.
iPhone Battery Nwụrụ Fast: Gịnị na Olee Ịzọpụta Ọ
Olee otú Chọpụta Refurbished iPhones
Olee otú iji belata iPhone 4S Video Size